smilecitys@gmail.com : ကိုညီရေ...ကျွန်တော်.. Fujitsu FMV-E8110 Windows XP Drivers လေးလိုချင်လို့ ပါဗျ..... ကျွန်တော် ရှာကြည့်တာလဲ.. လုံးဝရှာလို့မရလို့ပါ... ကျေးဇူး တင်ပါတယ်..ဗျာ.......
ကျွန်တော် အောက်မှာ Direct link ကနေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်. အားလုံးကို Download လုပ်လိုက်ပါ. ပြီးရင် Run လိုက်တာနဲ့ folder အသစ်နာမည်နဲ့ driver ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်. အဲ့ပေါ်လာတဲ့ folder ထဲက setup ဖိုင်ကို install လုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်. ဒီလောက်ဆိုရင် အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်. လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ. Download လုပ်ဖို့ကတော့ အခုအောက်ကလင့်တွေကို နှိပ်လိုက်တာနဲ့ adf.ly ဆိုက်ထဲကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်. အဲ့ဒီ့အခါကျရင် ငါးမိနစ်စောင့်ပေးပြီးတော့ ညာဖက်အပေါ်ဆုံးက SKIP AD ဆိုတဲ့ စာသားကိုနှိပ်ရမှာပါ. အ၀ါရောင်နောက်ခံနဲ့ပါ.
Intel(R) 915GM/915GMS/910GML Windows(R) XP/Windows(R) 2000 Display Driver
Realtek High Definition Audio Driver for Windows XP/2000
Atheros AR5001X+/AR5006X/AR5006EXS Wireless LAN Drive SONY FeliCa
Infineon Windows XP Alps Pointing-device Driver
Plugfree NETWORK Ver3.1 SMARTACCESS/Basic3
FM Advisor V3.50 L10A MO Supplement
Screen ကို password ဖြင့် lock ချထားလို့ရတဲ့ matrix screen lock 2.0
screen saver နဲ့ lock ချလို့ရပါတယ် . ။ ကိုကအပြင်ခဏသွားချင်ရင် screen ကို password ပေးပြီး lock ချသွားလို့ ရပါတယ် .. ကဲဒေါင်းချင်ရင် အောက်မှာ ဒေါင်းလော့လုပ်လိုက်ပါ .. ကိုက ကိစ္စတစ်ခုရှိလို့ အပြင်ကိုသွားချင်တယ် . Download ကလဲ လုပ်ထားတယ် မပြီးသေးဘူး . ဒုက္ခပဲဆိုပြီး ညည်းနေတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက်ပါ . သူ့ဟာသူ download လုပ်နေပါလိမ့်မယ် . တစ်ချို့ screen locker တွေဟာ Lock တော့ချပေးတယ် . ဒါပေမယ့် အင်တာနက်ကို ရပ်ထားလိုက်တယ် . ဒါလေးကတော့ အဆင်ပြေပါတယ် . လုပ်နည်း
(၅) ပြီးတာနဲ့ ကိုအပြင်ကိုသွားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အခုနက X icon လေးကို တစ်ချက်ကလစ်လိုက် တာနဲ့ lock ကျသွားလိမ့်မယ် . ကဲ အဆင်ပြေကြပါစေဗျာ .. ifile | Mirrorcreator | Minus | Mediafire
Norton All version Keys တွေပါ.
saiayaroo@gmail.comးအကို ရေ Norton Internet Security 2012 key လေးရရင်လိုချင်လို့ပါ။ မြန်မာ တမျိုးသားလုံးအတွက် တတ်နိုင်တဲ့ ဘက်က တတ်နိုင်သလောက်ကူညီပေးနေတဲ့အကို့ကိုလေး စားပါတယ်။
ညီလေးရေ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၁၊ ၂၀၁၂ သုံးမျိုးသလုံးစာ တင်ပေး လိုက်ပါတယ်. အောက်မှာ Download လုပ်လိုက်ပါ။ Download ifile.it | mediafire | Mirrorcreator | Minus
တောင်းထားတဲ့ ညီလေးတစ်ယောက် ရှိလို့ တင်ပေးလိုက် ပါတယ်. နောက်ဆုံး ထွက် version ပါပဲ. driver scanner software ပါ. ဒီ software က မိမိစက်မှာ လိုအပ်နေတဲ့ Driver တွေကိုပါ ရှာဖွေပေးနိုင်ပြီး Download ပါ ဆွဲနိုင်သည့် အပြင်၊ update ပါ လုပ်လို့ရပါတယ်. လိုအပ်မယ်ထင်တယ်ဆိုရင်တော့ Download သာ လုပ်ထားလိုက်ပါ. Driver အတွက် လိုအပ်နေတဲ့သူများ ရှိနေတဲ့သူများ အတွက်ပါ။
Download ifile | Minus | Mirrorcreator Read More
Protected folder v-1.1 (နောက်ဆုံးထွက်)
Gtalk မှးအစ်ကိုရေ လေး Protected folder လိုချင်လို့ နောက်ဆုံးထွက်လေး ကူညီပေးပါဦး . Folder တွေ lock ချချင်လို့ပါ.
တင်ပေးလိုက်ပါပြီညီလေးရေ. နောက်ဆုံးထွက် version ပါပဲ. အထဲမှာ patch ဖိုင် ပါပါတယ်.
msixkr32.dll error က ဘာ့ကြောင့်ဖြစ်တာလဲ
စောဂျွန်းကိုညီနေမင်းခင်ဗျာ ကျွန်တော့်စက်မှာ ဖွင့်လိုက်တိုင်း runtime error ဆိုပြီး တက်လာလို့ပါ အဲဒါဘယ်လိုဖြေရှင်း ရမလဲဆိုတာကို ကျေးဇူးပြုပြီးတော့
ပြောပြပေးစေ လိုပါတယ် အစ်ကိုက မေးစရာရှိရင် ဓာတ်ပုံရိုက်မေးပါဆိုလို့ ကျွန်တော် ဓာတ်ပုံပါ ရိုက်ပေးလိုက်ပါတယ် အစ်ကို အနေနဲ့ တတ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ကူညီ ပေးစေလိုပါတယ် . ကိုစောဂျွန်ရေ အဲ့ဒီ့ error မျိုးဟာ window စဖွင့်ဖွင့်ချင်း တက်လာတဲ့ program တွေထဲက တစ်ခုခုကြောင့်မို့ ဖြစ်တာပါ. ဘယ် program ကြောင့်ဆိုတာကတော့ အစ်ကိုပြောတဲ့ error မှာ အဖြေမတွေ့ပါဘူး. အဲ့တော့ တစ်ခုအကြံပေးချင်တာကတော့. အောက်က နည်းလမ်းနဲ့ စမ်းလုပ်ကြည့်လိုက်ပါ. ဒါဆိုရင် အဆင်ပြေသွား မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်. အဲ့ဒီ့ error ပျောက်သွားပေမယ့်. ညီ့အနေနဲ့ program တစ်ခုခုကို ဖွင့်ရင်းနဲ့ အဲ့ program ဟာ တစ်ခုခုဖြစ်နေတာမျိုး၊ တစ်နည်းအားဖြင့် error ဖြစ်တာမျိုး ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ အဲ့ program ကြောင့် ဆိုတာကို ခန့်မှန်းမိမယ်ဆိုရင် အဲ့ program ကို ဖြုတ်ပစ်လိုက်ပါ. ဖြုတ်တဲ့နေရာမှာလဲ Advanced uninstaller နဲ့ ဖြုတ်ပစ်ဖို့ အကြံပြုလိုပါတယ်. Advanced uninstaller program ဟာ registry ထဲမှာ ရှိတဲ့ ကျန်ရှိနေတဲ့ ဖိုင်တွေကိုပါ ဖျက်ပေးပါတယ်. အဲ့ဒါကြောင့် မို့လို့ပါ. Advanced uninstaller program ကို ဒီပို့စ်မှာ တင်ပေးထားပါတယ်.
အောက်ကနည်းအတိုင်းသာ လတ်တလော လုပ်ထားလိုက်ပါ. တကယ်လို့ အချိန်ရမယ်ဆိုရင်တော့ window စတက်တက်ချင်း auto run လာတတ်တဲ့ program တွေထဲက တစ်ခုချင်းစီကို အမှန်ခြစ်ဖြုတ်ပေး ပြီးတော့ စမ်းကြည့်ပါ. အချိန်ရမှနော်. အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ နောက်ဆုံး error မပေါ်တော့တဲ့ program ကို အမှန်ခြစ်ဖြုတ်မိတဲ့အချိန်ကျရင်တော့ အဲ့ဒီ့ error တက်လာတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး. အဲ့ဒါဆိုရင် ဖြစ်နေတဲ့ program ကို အတိအကျ သိနိုင်ပါပြီ. သိတာနဲ့ အဲ့ program ကို အထက်က ပြောထားတဲ့ Advanced uninstaller နဲ့ ဖြုတ်ပစ်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့. ပြီးမှ သူ့ထက်မြင့်တဲ့ version ကို ထပ်တင်ပေါ့. လုပ်နည်းRun Box မှာ msconfig ဆိုပြီး ရိုက်ထည့်ပါ (ဒါမှမဟုတ်) start အပေါ်မှာရှိတဲ့ search programs and file ဆိုတဲ့အကွက်မှာ msconfig ဆိုတဲ့ စာသားရိုက်ထည့်ပြီး msconfig ကိုနှိပ်လိုက်ပါ. ဒါဆိုရင် System Configuration Box ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်. အဲ့ဒါဆိုရင် အဲ့ box မှာ startup ဆိုကို ရွေးပြီး နှိပ်လိုက်ပါ။
ပြီးတာနဲ့ အလွယ်ကူဆုံး လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Disable All ကို နှိပ်လိုက်ပါ. ပြီးရင် Antivirus program ကိုတော့ အမှန်ခြစ်ပြန်ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင် Ok ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ အဲ့ဒါဆိုရင် Restart (or) Exit without restart ဆိုပြီးတော့ နှစ်မျိုးမေးလာပါလိမ့်မယ်. Restart ကို ရွေးပေးလိုက်ပါ. ကွန်ပျူတာ Restart ကျသွားပြီးတော့ ပြန်တက်တဲ့ အချိန်ကျရင် ညီပေါ်နေတဲ့ error ပေါ်လာမလား ဆိုတာကို ကြည့်လိုက်ပါ. ထပ်ပေါ်နေသေးရင် မေးလ်ထပ်ပို့ပေးပါ။ ဒါမှမဟုတ်ရင် အောက်မှာ မှတ်ချက်ပေးသွားလိုက်ပါ။ အဲ့ဒါက တစ်ခါတည်းနဲ့ လုပ်တဲ့နည်းပါ။ ဒါမှမဟုတ် တစ်ခုချင်းစီ လိုက်ဖြုတ်ပြီး စမ်းရင်လည်းပဲ ရပါတယ်. တစ်ခုချင်းစီ ဖြုတ်ပြီး restart လုပ်လုပ်ပြီးစမ်းရင် ဘယ် program က ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို သိရမှာ ဖြစ်ပါတယ်. ဓါတ်ပုံပါ ပို့ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ.
Ziddu ဆိုက်မှ Download လုပ်နည်း
ဟိုးအရင်တုန်းက ရေးပေးခဲ့ဖူးပါတယ်. ဒါပေမယ့် အခုအသေး စိတ် ပြန်ပြီးတော့ ရေးပေးပါ့မယ်. ကျွန်တော်လက်ရှိ ရေးနေတဲ့ http://www.nyinaymin.org ၀ဘ်ဆိုက် ထဲမှာ တင်ပေးထားတဲ့ Download link အားလုံးရဲ့ တစ်ခုချင်းစီ Download လုပ်ပုံလုပ်နည်းကို အသေးစိတ်ရေးပေးသွားမှာပါ. သိတဲ့သူများ အတွက်တော့ အရမ်းလွယ်ပေမယ့် အင်တာနက် ဆိုတာကို အခုမှ စပြီး ထိတွေ့တဲ့သူများအတွက်ကတော့ တစ်ကယ့်ကို ခက်ခဲမှု တစ်ခုပါ. အခု Download link တွေကို http://adf.ly ဆိုတဲ့ ဆိုက်ရဲ့ Url Short link နဲ့ ချိတ်ပြီးတော့ တင်ပေးထားတာပါ. ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုရင် ကျွန်တော် တင်ပေးထားတဲ့ software နာမည်တွေကို ရုတ်တရက် search engine ကနေ ရှာလို့ မတွေ့အောင်လို့ မြှုပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်. search engine ကနေ ကျွန်တော် တင်ထားတဲ့ ဖိုင်ကိုတွေ့သွားရင် ဘာဖြစ်နိုင်သလဲလို့ မေးလာရင် ကျွန်တော် တင်ထားတဲ့ Link တွေဟာ free အနေနဲ့ latest version များကို အခမဲ့ ဖြန့်ဝေပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် တင်ထားတဲ့ ဆိုက်ကနေ ဖိုက်နာမည်ကို ကြည့်ပြီးတာနဲ့ အဖျက် ခံလိုက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်. အခုလို Download link ကို မြှုပ်ထားတော့ ရုတ်တရက် ရှာလို့မတွေ့နိုင်တော့ပါဘူး. အရင်ဦးဆုံး http://www.zshare.com ဆိုက်ကနေ တင်ထားတဲ့ ဖိုင်တစ် ဖိုင် Download လုပ်ပုံလုပ်နည်းကို ပြောပြပါ့မယ်. ဒီပို့စ် ကို ဥပမာထားပြီး Download လုပ်ရင်းနဲ့ ရှင်းပြပေးသွားပါ့မယ်. ကဲစရအောင် အရင်ဆုံး ဒီကို နှိပ်လိုက်ပါ. အောက်ကပုံတွေသေးနေရင် ပုံကိုနှိပ်လိုက်ပါ ပုံကြီး ထွက်လာပါ လိမ့်မယ်.ရလာတဲ့ link မှာ ပုံထဲကအတိုင်း ziddu နဲ့ Download လုပ်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ziddu ဆိုတဲ့ စာတမ်းကို နှိပ်လိုက်ပါ..
၅ စက္ကန့် ပြည့်သွားတာနဲ့ အောက်က ပုံအတိုင်း Skip AD ဆိုတဲ့ စာတမ်းပေါ်လာ ပါလိမ့်မယ်. အဲ့ဒီ့ပေါ်လာတဲ့ စာတမ်းလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ. အဲ့ဒါဆိုရင် Ziddu ဆိုက်ထဲကို ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်. အဲ့မယ် ပုံထဲကအတိုင်း Download ဆိုတဲ့ အကွက်လေးကို နှိပ်လိုက်ပါ. ပြီးတာနဲ့ အောက်က ပြထားတဲ့ ပုံထဲကအတိုင်း ဘေးဖက်မှာရှိတဲ့ နံပါတ်အတိုင်း အကွက်ထဲမှာ ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ Download ဆိုတဲ့ အကွက်ကို နှိပ်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်.
ကဲအားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်. Read More
Zshare ဆိုက်မှ Download လုပ်နည်း
ဟိုးအရင်တုန်းက ရေးပေးခဲ့ဖူးပါတယ်. ဒါပေမယ့် အခုအသေး စိတ် ပြန်ပြီးတော့ ရေးပေးပါ့မယ်. ကျွန်တော်လက်ရှိ ရေးနေတဲ့ http://www.nyinaymin.org ၀ဘ်ဆိုက် ထဲမှာ တင်ပေးထားတဲ့ Download link အားလုံးရဲ့ တစ်ခုချင်းစီ Download လုပ်ပုံလုပ်နည်းကို အသေးစိတ်ရေးပေးသွားမှာပါ. သိတဲ့သူများ အတွက်တော့ အရမ်းလွယ်ပေမယ့် အင်တာနက် ဆိုတာကို အခုမှ စပြီး ထိတွေ့တဲ့သူများအတွက်ကတော့ တစ်ကယ့်ကို ခက်ခဲမှု တစ်ခုပါ. အခု Download link တွေကို http://adf.ly ဆိုတဲ့ ဆိုက်ရဲ့ Url Short link နဲ့ ချိတ်ပြီးတော့ တင်ပေးထားတာပါ. ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုရင် ကျွန်တော် တင်ပေးထားတဲ့ software နာမည်တွေကို ရုတ်တရက် search engine ကနေ ရှာလို့ မတွေ့အောင်လို့ မြှုပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်. search engine ကနေ ကျွန်တော် တင်ထားတဲ့ ဖိုင်ကိုတွေ့သွားရင် ဘာဖြစ်နိုင်သလဲလို့ မေးလာရင် ကျွန်တော် တင်ထားတဲ့ Link တွေဟာ free အနေနဲ့ latest version များကို အခမဲ့ ဖြန့်ဝေပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် တင်ထားတဲ့ ဆိုက်ကနေ ဖိုက်နာမည်ကို ကြည့်ပြီးတာနဲ့ အဖျက် ခံလိုက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်. အခုလို Download link ကို မြှုပ်ထားတော့ ရုတ်တရက် ရှာလို့မတွေ့နိုင်တော့ပါဘူး. အရင်ဦးဆုံး http://www.zshare.com ဆိုက်ကနေ တင်ထားတဲ့ ဖိုင်တစ် ဖိုင် Download လုပ်ပုံလုပ်နည်းကို ပြောပြပါ့မယ်. ဒီပို့စ် ကို ဥပမာထားပြီး Download လုပ်ရင်းနဲ့ ရှင်းပြပေးသွားပါ့မယ်. ကဲစရအောင် အရင်ဆုံး ဒီကို နှိပ်လိုက်ပါ. အောက်ကပုံတွေသေးနေရင် ပုံကိုနှိပ်လိုက်ပါ ပုံကြီး ထွက်လာပါ လိမ့်မယ်.ရလာတဲ့ link မှာ ပုံထဲကအတိုင်း zshare နဲ့ Download လုပ်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် zshare ဆိုတဲ့ စာတမ်းကို နှိပ်လိုက်ပါ..
၅ စက္ကန့် ပြည့်သွားတာနဲ့ အောက်က ပုံအတိုင်း Skip AD ဆိုတဲ့ စာတမ်းပေါ်လာ ပါလိမ့်မယ်. အဲ့ဒီ့ပေါ်လာတဲ့ စာတမ်းလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ. အဲ့ဒါဆိုရင် Zshare ဆိုက်ထဲကို ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်. အဲ့မယ် ပုံထဲကအတိုင်း Download Now! ဆိုတဲ့ အ၀ါရောင် အကွက်လေးကို နှိပ်လိုက်ပါ. အခုလိုမျိုး Download link တန်းပြီး ကျလာပါလိမ့်မယ် internet download manager တင်ထား သူများ အောက်ကပုံအတိုင်း ကျလာရင် Start Download ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ သူ့ဟာသူ Download လုပ်နေပါလိမ့်မယ်. internet download manager မတင်ထားသူများကျတော့ ရိုးရိုး Save box လေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်. ပေါ်လာတဲ့ box က save file ကို နှိပ်ပြီး Download လုပ်လိုက်ပါ..
ဟိုးအရင်တုန်းက ရေးပေးခဲ့ဖူးပါတယ်. ဒါပေမယ့် အခုအသေး စိတ် ပြန်ပြီးတော့ ရေးပေးပါ့မယ်. ကျွန်တော်လက်ရှိ ရေးနေတဲ့ http://www.nyinaymin.org ၀ဘ်ဆိုက် ထဲမှာ တင်ပေးထားတဲ့ Download link အားလုံးရဲ့ တစ်ခုချင်းစီ Download လုပ်ပုံလုပ်နည်းကို အသေးစိတ်ရေးပေးသွားမှာပါ. သိတဲ့သူများ အတွက်တော့ အရမ်းလွယ်ပေမယ့် အင်တာနက် ဆိုတာကို အခုမှ စပြီး ထိတွေ့တဲ့သူများအတွက်ကတော့ တစ်ကယ့်ကို ခက်ခဲမှု တစ်ခုပါ. အခု Download link တွေကို http://adf.ly ဆိုတဲ့ ဆိုက်ရဲ့ Url Short link နဲ့ ချိတ်ပြီးတော့ တင်ပေးထားတာပါ. ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုရင် ကျွန်တော် တင်ပေးထားတဲ့ software နာမည်တွေကို ရုတ်တရက် search engine ကနေ ရှာလို့ မတွေ့အောင်လို့ မြှုပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်. search engine ကနေ ကျွန်တော် တင်ထားတဲ့ ဖိုင်ကိုတွေ့သွားရင် ဘာဖြစ်နိုင်သလဲလို့ မေးလာရင် ကျွန်တော် တင်ထားတဲ့ Link တွေဟာ free အနေနဲ့ latest version များကို အခမဲ့ ဖြန့်ဝေပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် တင်ထားတဲ့ ဆိုက်ကနေ ဖိုက်နာမည်ကို ကြည့်ပြီးတာနဲ့ အဖျက် ခံလိုက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်. အခုလို Download link ကို မြှုပ်ထားတော့ ရုတ်တရက် ရှာလို့မတွေ့နိုင်တော့ပါဘူး. အရင်ဦးဆုံး http://www.mediafire.com ဆိုက်ကနေ တင်ထားတဲ့ ဖိုင်တစ် ဖိုင် Download လုပ်ပုံလုပ်နည်းကို ပြောပြပါ့မယ်. ဒီပို့စ် ကို ဥပမာထားပြီး Download လုပ်ရင်းနဲ့ ရှင်းပြပေးသွားပါ့မယ်. ကဲစရအောင် အရင်ဆုံး ဒီကို နှိပ်လိုက်ပါ. အောက်ကပုံတွေသေးနေရင် ပုံကိုနှိပ်လိုက်ပါ ပုံကြီး ထွက်လာပါ လိမ့်မယ်.ရလာတဲ့ link မှာ ပုံထဲကအတိုင်း mediafire နဲ့ Download လုပ်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် mediafire ဆိုတဲ့ စာတမ်းကို နှိပ်လိုက်ပါ..
၅ စက္ကန့် ပြည့်သွားတာနဲ့ အောက်က ပုံအတိုင်း Skip AD ဆိုတဲ့ စာတမ်းပေါ်လာ ပါလိမ့်မယ်. အဲ့ဒီ့ပေါ်လာတဲ့ စာတမ်းလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ. အဲ့ဒါဆိုရင် Mediafire ဆိုက်ထဲကို ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်. အဲ့မယ် ပုံထဲကအတိုင်း click here to start download from mediafire ဆိုတဲ့ အပြာရောင် စာတမ်းကို နှိပ်လိုက်ပါ. အခုလိုမျိုး Download link တန်းပြီး ကျလာပါလိမ့်မယ် internet download manager တင်ထား သူများ အောက်ကပုံအတိုင်း ကျလာရင် Start Download ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ သူ့ဟာသူ Download လုပ်နေပါလိမ့်မယ်. internet download manager မတင်ထားသူများကျတော့ ရိုးရိုး Save box လေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်. ပေါ်လာတဲ့ box က save file ကို နှိပ်ပြီး Download လုပ်လိုက်ပါ..
ifile.it ဆိုက်မှ Download လုပ်နည်း
ဟိုးအရင်တုန်းက ရေးပေးခဲ့ဖူးပါတယ်. ဒါပေမယ့် အခုအသေး စိတ် ပြန်ပြီးတော့ ရေးပေးပါ့မယ်. ကျွန်တော်လက်ရှိ ရေးနေတဲ့ http://www.nyinaymin.org ၀ဘ်ဆိုက် ထဲမှာ တင်ပေးထားတဲ့ Download link အားလုံးရဲ့ တစ်ခုချင်းစီ Download လုပ်ပုံလုပ်နည်းကို အသေးစိတ်ရေးပေးသွားမှာပါ. သိတဲ့သူများ အတွက်တော့ အရမ်းလွယ်ပေမယ့် အင်တာနက် ဆိုတာကို အခုမှ စပြီး ထိတွေ့တဲ့သူများအတွက်ကတော့ တစ်ကယ့်ကို ခက်ခဲမှု တစ်ခုပါ. အခု Download link တွေကို http://adf.ly ဆိုတဲ့ ဆိုက်ရဲ့ Url Short link နဲ့ ချိတ်ပြီးတော့ တင်ပေးထားတာပါ. ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုရင် ကျွန်တော် တင်ပေးထားတဲ့ software နာမည်တွေကို ရုတ်တရက် search engine ကနေ ရှာလို့ မတွေ့အောင်လို့ မြှုပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်. search engine ကနေ ကျွန်တော် တင်ထားတဲ့ ဖိုင်ကိုတွေ့သွားရင် ဘာဖြစ်နိုင်သလဲလို့ မေးလာရင် ကျွန်တော် တင်ထားတဲ့ Link တွေဟာ free အနေနဲ့ latest version များကို အခမဲ့ ဖြန့်ဝေပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် တင်ထားတဲ့ ဆိုက်ကနေ ဖိုက်နာမည်ကို ကြည့်ပြီးတာနဲ့ အဖျက် ခံလိုက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်. အခုလို Download link ကို မြှုပ်ထားတော့ ရုတ်တရက် ရှာလို့မတွေ့နိုင်တော့ပါဘူး. အရင်ဦးဆုံး http://ifile.it ဆိုက်ကနေ တင်ထားတဲ့ ဖိုင်တစ် ဖိုင် Download လုပ်ပုံလုပ်နည်းကို ပြောပြပါ့မယ်. ဒီပို့စ် ကို ဥပမာထားပြီး Download လုပ်ရင်းနဲ့ ရှင်းပြပေးသွားပါ့မယ်. ကဲစရအောင် အရင်ဆုံး ဒီကို နှိပ်လိုက်ပါ. အောက်ကပုံတွေသေးနေရင် ပုံကိုနှိပ်လိုက်ပါ ပုံကြီး ထွက်လာပါ လိမ့်မယ်.ရလာတဲ့ link မှာ ပုံထဲကအတိုင်း ifile.it နဲ့ Download လုပ်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ifile.it ဆိုတဲ့ စာတမ်းကို နှိပ်လိုက်ပါ..
၅ စက္ကန့် ပြည့်သွားတာနဲ့ အောက်က ပုံအတိုင်း Skip AD ဆိုတဲ့ စာတမ်းပေါ်လာ ပါလိမ့်မယ်. အဲ့ဒီ့ပေါ်လာတဲ့ စာတမ်းလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ. အဲ့ဒါဆိုရင် ifile.it ဆိုက်ထဲကို ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်. အဲ့မယ် ပုံထဲကအတိုင်း Request Download Ticket ဆိုတဲ့ စာတမ်းကို နှိပ်လိုက်ပါ. အခုလိုမျိုး Download link တန်းပြီး ကျလာပါလိမ့်မယ် internet download manager တင်ထား သူများ အောက်ကပုံအတိုင်း ကျလာရင် Start Download ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ သူ့ဟာသူ Download လုပ်နေပါလိမ့်မယ်. internet download manager မတင်ထားသူများကျတော့ ရိုးရိုး Save box လေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်. ပေါ်လာတဲ့ box က save file ကို နှိပ်ပြီး Download လုပ်လိုက်ပါ..
တစ်ကယ်လို့မှ Download link မကျလာခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ အောက်ကပုံအတိုင်း if it doesn’t pleace clickhere ဆိုတဲ့ စာတမ်းကို နှိပ်လိုက်ပါ Download link တန်းကျလာပါလိမ့်မယ်...
Mediafire တွင် ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ဖိုင်အဖျက်ခံရခြင်း
Company Name: Bluerberry Software LtdContact Address:Contact Name: Raspal ChimaContact Phone:Contact Email: raspal.chima@bbconsult.co.uk
http://www.mediafire.com/myaccount/suspension_claim.php? u=0c813ea3efc8097b69f849360ba8cdb8e850bcca8770bb96 Step 2. Use the following PIN on the counterclaim webpage to begin the process:
This isapost-only mailing. Replies to this message are not monitored or answered. ဒီတစ်ခါတော့ အားလုံး သိရအောင်လို့ သူတို့ သတိပေးပြီး ဖျက်လိုက်တဲ့စာကိုပါ တစ်ခါတည်း တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်. အားလုံး သတိတရ ရှိဖို့နဲ့ ဖိုင်တင်တဲ့အချိန်မှာ ဖြစ်နိုင်ရင် software နာမည်နဲ့ မတင်မိဖို့အတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်. တကယ်လို့သာ copyright နဲ့ငြိပြီး share hosting ဆိုက်တွေသာ အဖျက်ခံရတော့မယ် ဆိုရင်တော့ နောက်ဆုံးအစီအစဉ်အနေနဲ့ hosting တစ်ခု မဖြစ်မနေ ၀ယ်ပြီးတော့ တင်ပေးဖို့အထိ စီစဉ်ထားပါတယ်. မှတ်ချက်ပေးတဲ့နေရာမှာရော. မေးလ်နဲ့ပါ အားတက်သရော ကူညီချင်တဲ့ ညီငယ်များ ညီမငယ်များ ရှိသေးတဲ့အတွက် တကယ်လည်း ၀မ်းသာမိပါတယ်. အဲ့လိုမေးလ်တွေနဲ့ ကွန်မန့်တွေကို ရလိုက်တဲ့အချိန်၊ ဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ရင်ထဲမှာ အရမ်းပျော်သွားမိပါတယ်. ဒါရင်ထဲက စကားပါ. ကျွန်တော် ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းနဲ့ တိုက်ပင်လိုက်ပါဦးမယ်. ဘဏ်ကိုလည်း မေးကြည့်ပါဦးမယ်. အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်တော့ ဘဏ်အကောင့်နဲ့ လှူတဲ့သူရဲ့ email လိပ်စာနဲ့နာမည်ကို (နာမည်အမှန်မထည့်ချင်သူများ၊ gmail တွင်ပေးထားသည့် နာမည်ကိုလည်း ပေးနိုင်ပါတယ်) စာရင်းနှင့်တကွ ဖော်ပြပေးမှာပါ. အဲ့ဒီ့လှူထားတဲ့ ငွေကိုတော့ ကျွန်တော် share hosting တစ်ခု လုပ်ဖို့အထိတော့ ရည်မှန်းထားပါတယ်. 2000 (နှစ်ထောင်) တတ်နိုင်သည့်သူများလည်း အားမငယ်ပါနဲ့ လှူလို့ရပါတယ်. ပိုက်ဆံနည်းလို့ နာမည်မထည့်ချင်သူများလည်း ကျွန်တော့်ကို နာမည်တစ်ခုခုသတ်မှတ်ပြီးတော့ ပေးပေးပါ. အဲ့နာမည်နဲ့ လှူငွေကို စာရင်းနှင့်တကွ ၀ဘ်ဆိုက်မှာ လူတိုင်းမြင်နိုင်အောင် ကျွန်တော် စီစဉ်ထားပါတယ်. share hosting လုပ်ဖို့အတွက် နည်းပညာပိုင်း ကျွမ်းကျင်သူများ ၀ဘ်ဆိုက်ပိုင်းနှင့် hosting ပိုင်းကျွမ်းကျင်သူများလည်း ပါဝင်လို့ရပါတယ်. အားလုံးငြှိနှိုင်းပြီး လုပ်သွားရင် အဆင်ပြေသွားမှာပါ. အလှူငွေနှင့် share hosting အတွက် ကုန်ကျငွေများကို ကျွန်တော် တင်ပြပေးသွားမှာပါ. လုပ်ဖို့ကတော့ အများကြီးရှိပါတယ်. ကူညီမယ်လို့မေးလ်ပို့တဲ့ ညီလေးနဲ့ ညီမလေးတွေရော ကွန်မန့်ပေးကြတဲ့ ညီလေးနဲ့ ညီမလေးတွေရော အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. မလှူလည်းပဲ ကျွန်တော် တတ်နိုင်သလောက်တော့ လုပ်ပေးသွားဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားပါ. ဒါပေမယ့် စကားပုံရှိပါတယ် နှမ်းတစ်လုံး ကောင်းယုံနဲ့ ဆီမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတဲ့. အဲ့စကားပုံလိုပဲ. နှမ်းစေ့လေးတွေများသွားရင် အလိုလို ဆီဖြစ်သွား မှာပါ. အလှူငွေဆိုတာ လှူတဲ့သူအတွက် ကုသိုလ်ရပေမယ့် ထိန်းသိမ်းရတဲ့ သူအတွက်တော့ မီးခဲကိုင်ရသလိုပါပဲ. ဘာလို့လဲဆိုရင် လှူလိုက်တဲ့ အလှူငွေကို အလွဲသုံးစားဖြစ်စေ၊ လိုအပ်လို့ဖြစ်စေ သုံးစွဲမိသွားရင် အဲ့ဒါ မီးခဲကို မျိုချရသလိုပါပဲ. ကော့သောင်းက ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းများနှင့် တစ်ခြားသူများလည်း ကျွန်တော့်ဆိုင်အခြေအနေနဲ့ ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတာကို သိချင်သူများ မေးလ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ဖုန်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ လာရောက်ပြီး ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်. လှူဒါန်းထားသူများ ဖြစ်နိုင်လျှင် ၂ ထောင်နိုင်သည် ဖြစ်စေ ၃ ထောင်နိုင်သည်ဖြစ်စေ လှူလို့ရပါတယ်. အခုပြုလုပ်မယ့် share hosting သည် တစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက် မဟုတ်ဘဲ အများအတွက် ဖြစ်သောကြောင့် ကိုတတ်နိုင်သလောက် လှူဒါန်းလို့ရပါတယ်. မေးလ်ဖြင့် မေးမြန်းချင်လျှင် လှူဒါန်းလိုက်သည့် အကြောင်းပေးပို့လိုလျှင် sharehosting.donate@gmail.com သို့ ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။
Nyi Nay Min Computer & PrinterTraining, Sale & Service CenterNo(167), Mya Ye Palal Road,Padauk Shwe War Quarter,Kaw Thaung TownshipTanintharye Devision, MyanmarPhone ... +066862735597
KBZ BANK (Myanmar)Bank Phone 059-51938, 059-51939 Account no. 0111210054272 လူဆိုတာ သေသွားရင် မိမိမြတ်မြတ်နိုးနိုးတန်ဖိုးထားတဲ့ ပစ္စည်းမပြောနဲ့ လက်က ပတ်ထားတဲ့ နာရီကိုတောင် အကုန်ချွတ်ထားခဲ့ရပါတယ်. ကိုသယ်သွားနိုင်တာက တစ်ခုတည်းပါ၊ မိမိပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ကောင်းမှု့ကုသိုလ်တစ်ခုတည်းပါ။ ဘယ်ဘာသာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုရှိပါတယ်. ကောင်းတာလုပ်ရင် ကောင်းတာဖြစ်မယ်၊ မကောင်းတာလုပ်ရင် မကောင်းတာဖြစ်မယ်။ သူများအပေါ် မလိုမုန်းထားပြီး အကောက်ကြံရင် ကိုယ့်အပေါ်ကို အကောက်ကြံတဲ့သူလည်း အလိုလို ပေါ်လာတတ်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ ညီနေမင်းဆိုတာ ယနေ့ ပို့စ်ရေးနိုင်တယ်။ ဖြေပေးနိုင်တယ် ဆိုပေမယ့် နိုင်သလောက်ကို ကူညီပေးနေတာဟာ နှာခေါင်းနှစ်ပေါက်က အသက်ရှူနေချိန်၊ နှလုံးခုန်ပြီး အသက်ရှင်နေစဉ်မှာပဲ ပြုလုပ်ပေးမှာပါ။ ဘယ်အချိန်သေမင်းက ခေါ်မယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော်လည်း မသိပါဘူး။ သူလာခေါ်မယ့် အချိန်ကို ထမင်းစားပြီးတော့ ငုတ်တုတ်ထိုင်စောင့်နေရတာပါ. သူလာခေါ်ခဲ့ရင် ကျွန်တော်သယ်သွားနိုင်တာက တစ်ခုတည်းပါ။ အဲ့ဒါက ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ ကုသိုလ်တရားပါ။ ကျွန်တော် မတော်မတရားတာ လုပ်ခဲ့မိခဲ့ရင်တော့ အဲ့ဒီ့အကုသိုလ်ကံက ကျွန်တော်ခံရမှာပါ။ အဲ့ဒီ့အတွက်ကြောင့် အကုသိုလ်တွေ နည်းပြီး ကုသိုလ်များအောင် လုပ်ရင်းနဲ့ သေမယ့်နေ့ကို စောင့်နေတာပါ. ကျွန်တော်ဝဘ်ဆိုက်ကို ကျွန်တော်သေသွားသည့်တိုင်အောင် အနည်းဆုံး 20 နှစ်လောက် ဆက်ပြီး အသက်ရှင်နေဖို့အတွက် သက်တမ်းတိုးထားမှာပါ. တကယ်လို့ သေမယ်ဆိုတာကို သိလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ဆက်ပြီးရေးနိုင်ဖို့ ၀ဘ်ဆိုက် အသက်ရှင်နိုင်ဖို့အတွက် တစ်စုံတစ်ယောက်ကို account နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာအားလုံးလွှဲပေးခဲ့မှာပါ. ကျွန်တော် အဲ့လောက်အထိ ကြိုတွေးထားပါတယ်. ဒါပေမယ့် မိမိအသက်ရှင်နေစဉ် လူ့ဘောင်၊ လူ့လောကမှာ နေစဉ်မှာတော့ ဘာပဲလုပ်လုပ် စေတနာ၊ ဂရုဏာရှေ့ထားပြီး လုပ်သွားဖို့ပါပဲ။ ဘာသာတွေ၊ အယူဝါဒတွေ ကွဲပြားနေပေမယ့် လူဟာလူပါပဲ။ အဲ့ဒီ့လို လူဖြစ်နေရတဲ့အတွက် ဘယ်ဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်ဘာသာပဲ ကိုးကွယ်ကိုးကွယ် တစ်နေ့သေရမှာပါပဲ. ဘာသာတိုင်းဟာ မိမိရဲ့ယုံကြည်ရာအလျှောက် ကောင်းမှု့ကုသိုလ်လုပ်တာဟာ နောက်ဘ၀အတွက် ရည်မှန်းပြီးလုပ်ကြတာပါ. ဒီဘ၀အတွက်ကတော့ ခံစားထိုက်ရင် ခံစားရပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော့်ကို ညီတစ်ယောက် မေးဖူးပါတယ်. အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ သူတစ်ယောက် ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအစ်ကိုတဲ့။ ကြိုးစားရမှာပေါ့ ဆိုတဲ့ရေလဲ သုံးနေတဲ့ စကားကို ကျွန်တော် မပြောလိုက်ပါဘူး. ကျွန်တော်ပြောပြလိုက်တာက. ကိုဝါသနာပါတဲ့အလုပ်တစ်ခု၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရပ်တစ်ခုကို တစ်စိုက်မတ်မတ်နဲ့ စေတနာရှေ့ထား၊ ၀ိရိယထားပြီး လုပ်ဆောင်သွားဖို့နဲ့ လက်အောက်ငယ်သားတွေအပေါ်ကို တတ်နိုင်သလောက် ကူညီပေးဖို့ပါ။ လူဆိုတာ ကြိုးစားတိုင်း မအောင်မြင်ပါဘူး. တစ်ချို့ ဆယ်တန်းကို ဆရာဝန်ဘွဲ့လိုချင်လွန်းလို့ နေမအား ညမအား စာတွေအသေကြည့် အသေကျက်ပါတယ်. ဒါပေမယ့် ဖြစ်ချင်မှဖြစ်တာပါ. ဦးနှောက်ရဲ့ မှတ်သားနိုင်မှု့ဟာ သူ့ကိုခိုင်းတဲ့အပေါ်မှာလည်း မူတည်ပါတယ်. ကလေးတစ်ယောက်ကို ဆန်အိတ်တစ်အိတ် ထမ်းခိုင်းလို့ရလာတာ မဟုတ်ပါဘူး. ကျွန်တော့်ကို လူသိများလာတာ. ၀ဘ်ဆိုက်ကို လူသိလာတာဟာ လုပ်ယူထားတာ မဟုတ်ပါဘူး. နာမည်တစ်ခု ရလာဖို့အတွက်လည်း အစကတည်းက ရည်ရွယ်မထားပါဘူး. ဒါပေမယ့် ၀ဘ်ဆိုက်စလုပ်တုန်းက ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအတွက် ကဗျာလေးတွေ တင်ရင်းနဲ့ နည်းပညာဆိုက်ဖြစ်သွားတာပါ. နည်းပညာဆိုက်လို့စပြီး သတ်မှတ် လိုက်တာဟာ ပို့စ် 1000 ကျော်လောက်ကမှ စပြီး သတ်မှတ်လိုက်တာပါ။ မေးလာတာတွေ ရှင်းပြနိုင်ဖို့အတွက် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် စမ်းတယ်. လေ့ကျင့်တယ်. လေ့လာတယ်. အားလုံးအဆင်ပြေပြီ. ဒီအဖြေဟာ သူ့ပြဿနာအတွက် ဖြေရှင်း နိုင်တယ်ဆိုမှ ၀ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်တာပါ. ကျွန်တော်အပင်ပန်းခံတယ် မခံဘူးဆိုတာ ကျွန်တော်နဲ့ အတူနေခဲ့တဲ့ သူတိုင်းသိကြပါတယ်. အဲ့လို ကူညီရင်းနဲ့ လူသိများလာပြီးတော့ ညီနေမင်းဆိုတဲ့ဝဘ်ဆိုက်ကို အွန်လိုင်းပေါ်မှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် လက်ဆင့်ကမ်းလာကြရင်းနဲ့ လူကြည့်များလာတာပါ။ ဒါဟာ လုပ်ယူထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာက ဒါကိုပြောချင်တာ မဟုတ်ပါဘူး. အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ရင် စေတနာ ရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့သာ အဆက်မပြတ် လုပ်သွားပါ. တစ်နေ့မှာ အောင်မြင်မှု့ဆိုတာ ရလာမှာပါ။ အသေအလဲ ကြိုးစားတိုင်းလည်း ဖြစ်မလာတတ်ပါဘူး။ စေတနာများစွာဖြင့် ညီနေမင်း (နည်းပညာ)konyinaymin@gmail.comhttp://www.nyinaymin.org
format အားလုံးနီးပါးကို လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Format Factory converter v-2.90
kzh702@gmail.com: format အားလုံးကိုconvert လုပ်လို့ရတဲ့ converter လေးများ ရှိရင်မစပါဦး ကိုညီရေ ...
ကို kzh702 ရေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ. လုပ်လို့ရတဲ့ Format တွေကတော့All to MP4/3GP/MPG/AVI/WMV/FLV/SWF.
အဲ့ဒီ့ format တွေကို ပြောင်းပေးနိုင်ပါတယ်. အားလုံးနီးပါးလောက် ရပါတယ်. latest version ပါ. အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်.
Minus | ifile | Mediafire
Inbox ထဲက မေးလ်အကုန်လုံးကို တစ်ခါတည်းနှင့် ဘယ်လိုဖျက်ရလဲ
thantzinwin123@googlemail.com : အကိုညီ့ကို တခု ကူညီပေးပါလား ညီ့မေးလ် inbox ထဲမှာ မေးလ်တွေ အရမ်းများနေလို့ပါ အကုန်လုံးကို တခါတည်း ပျက်လို့ရမယ့် နည်းလေးပြောပေးပါလား ခင်မင်လျက်ပါ အကို ကျေးဇူးပြုပြီး ပြောပြပါနော် ..
ကဲကိုသန့်ဇင်ဝင်းရေ ဘာလို့ တစ်ခါတည်း ဖျက်ချင်တယ် ဆိုတဲ့အကြောင်းကို မသိပေမယ့် ဖျက်လို့ရတဲ့ နည်းလမ်းကို ပြောပြပေး လိုက်ပါ့ မယ်. အောက်မှာ သေချာရှင်း ပြပေးထားပါတယ်. တစ်ပုံချင်းစီ လိုက်ကြည့်လိုက်လို့ ပါတယ်. video file နဲ့ မရှင်းပြတာက ဒီ ကွန်ပျူတာထဲမှာ recoder software မရှိလို့ပါ. အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်. လုပ်နည်းက လွယ်ပါတယ်. Inbox ထဲက ဟာကို အရင် delete လုပ်မယ်. ပြီးတာနဲ့ trash ထဲကနေ အပြီးဖျက်ပစ်မယ်.Inbox ကို နှိပ်ပါ
အခု Inbox ထဲက မေးလ်တွေ ဖျက်ပြီးသွားလို့ Trash ထဲကို ရောက်နေတဲ့ မေးလ်တွေကို အပြီးတိုင် ဖျက်ပစ်တော့ပါမယ်.Trash ကို နှိပ်ပါ
"Confirm deleting Messages" ဆိုပြီး Message box ပေါ်လာရင် Ok ပေးလိုက်ပါ. ကဲ ဒါဆိုရင်တော့ ညီဖျက်ချင်တဲ့ မေးလ်တွေကို ခဏလေးနဲ့ ဖျက်လို့ ရသွားပါပြီ. အဆင်ပြေမယ် လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်. Read More
Window တင်ရာတွင် ဖြစ်ပျက်တတ်သည့် ပြဿနာများကြောင့် မဖြစ်မနေ ပြောင်းလဲပြုပြင်ပေးရမည့် အချက်များနှင့် လိုအပ်သည့် software များ
sawnaybwe : hi bro, i would like to ask you about my Window problem. I using window7ultimate edition. The problem is when my computer is start it's always showing the message that Your Computer is Not Geuine. When i checked in properties it's activated. I tried to solve that problem by activated with the several Activators but it's not working.Could you pls help me how to solve it. Looking forward to hearing from you. Thanks in Advance,
ကိုစောနေဘွဲ့ရေ window geuine လုပ်တဲ့နေရာမှာ လိုအပ်ချက်လေးတွေကို ပြောပြပါ့မယ်. window geuine ကို window တင်ပြီးပြီးချင်း geuine (တစ်နည်းအားဖြင့် activated ဖြစ်မဖြစ်)ကို ပထမဦးဆုံး စစ်ဆေးရပါမယ်. မဖြစ်ရင် window တင်ပြီးပြီးချင်း တစ်ခါတည်း Loader တစ်ခုခုဖြင့် license version ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်. ဘာလို့လဲဆိုရင် . ကိုက window က activated မဖြစ်သေးဘဲ တစ်နည်းအားဖြင့် geuine မဖြစ်သေးဘဲနှင့် အင်တာနက် ချိတ်ပြီး သုံးမိမယ်ဆိုရင် window update က တန်းပြီးတော့ update လုပ်တတ်ပါတယ်. အဲ့အချိန်ကျရင် ကိုက မသိလိုက်ဘဲ နေတတ်ပါတယ်. window update လုပ်ပြီးတဲ့ အချိန်ကျမှ geuine ဖြစ်အောင် လုပ်တဲ့အခါကျရင် အဆင်မပြေ အများဆုံးဖြစ်တတ်ပါတယ်. အဲ့လိုအချိန်ကျရင် system restore ကိုပြန်သွားပြီးတော့ ကို မသိဘဲနှင့် window update လုပ်လိုက်တဲ့ ရက်ကို လိုက်ရှာလိုက်ပါ. တွေ့ပြီဆိုတာနဲ့ window update မလုပ်ခင် ရက်တွေထဲက တစ်ရက်ရက်ကို နောက်ဆုတ်ပြီး restore လုပ်ရပါတယ်. ပြီးတော့မှ geuine ဖြစ်အောင် လုပ်မှ အဆင်ပြေသွား တတ်ပါတယ်. အောက်မှာ သိသင့်တယ်ထင်လို့ ရေးပေးလိုက်ပါတယ်.
Window တင်ပြီးပြီးချင်း ဘာစပြီးလုပ်သင့်သလဲ
မိမိတင်ထားသော window သည် Thai (or) other Language version ဖြစ်နေလျှင် thai keyboard နှင့် တစ်ခြား setting ပိုင်းတွေအားလုံးနီးပါးကို united state (or) English (US) ကို ပြောင်းပေးရပါမယ်. အဲ့အပိုင်းကတော့ Control Panel >> Region and Language ထဲကို ၀င်ပြီး ပြင်ပေးရပါမယ်။ (မပြင်ပေးရင်တော့ software တင်တဲ့အခါမှာ window အခွေက Thai version ဖြစ်နေလျှင် default က thai language ဖြစ်နေတာမို့ Thai Language နှင့်ပဲ install လုပ်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်)
Start အပေါ်က search Programs and files ကနေ "window update" လို့ ရိုက်ရှာလိုက်ပြီး Window update ပေါ်လာရင် နှိပ်လိုက်ပါ. ပြီးလျှင် Change settion ကို နှိပ်ပြီး Recommended updates နှင့် Who can install updates အမှန်ခြစ်နှစ်ခုစလုံးကို ဖြုတ်၊ အပေါ်က Important updates အောက်က အကွက်ကို နှိပ်ပြီး "Never check for update(not recommended) ကို ရွေးပေးလိုက်ပါ. ပြီးလျှင် Ok ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
Kaspersky internet security 2012 တင်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ Control Panel >> Action center ကိုနှိပ်ပြီး Change action center settings ကိုနှိပ်ပြီး အဲ့ထဲမှာ ရှိ်တဲ့ အမှန်ခြစ်အားလုံးကို ဖြုတ်ပစ်လိုက်ပြီး OK ပေးလိုက်ပါ။ ဘာကိုမှ အမှန်ခြစ် မထားထားပါနှင့် ပြီးရင် ကျွန်တော် တင်ပေးထားတဲ့ Firewall ဖြစ်တဲ့ ZoneAlarm PRO Firewall 2012 ကို install လုပ်လိုက်ပါ့. ဒီပို့စ်အောက်ဆုံးမှာ ZoneAlarm PRO Firewall 2012 ကို keygen နှင့်ပါ တစ်ခါတည်း တင်ပေးလိုက်ပါတယ်. Keygen သုံးနည်းကို မသိရင် ဆိုက်ရဲ့ ညာဖက်ခြမ်းမှာ video file နဲ့ အသံပါ ထည့်ပြီး သေချာရှင်းပြထားပါတယ်. download လုပ်ပြီး ကြည့်လိုက်ပါ. ပြီးလျှင် Control Panel >> Action center ထဲက User account control settings ကိုတော့ Default မှာပဲ ထားထားပေးထားပါ. တစ်ခါတစ်ရံမှာ တစ်ချို့က software install လုပ်ရာမှာ လွယ်ကူစေဖို့ never notify ဆိုပြီး အောက်ဆုံးကို ခဏထားထားတတ်ပါတယ်. software လည်း သွင်းပြီးရော Default setting ဖြစ်တဲ့ ဒုတိယလိုင်းမှာ ပြန်ထားထားဖို့ သတိမေ့နေတတ်ပါတယ်. အဲ့တစ်ချက်ကိုတော့ နည်းနည်းလေး သတိထားပေးစေချင်ပါတယ်.
Standard software တွေ တင်ပြီးသွားရင်တော့ kaspersky internet security ၂၀၁၂ ကို 100% အထိ update လုပ်ဖို့ လုံးဝ(လုံးဝ)သတိမမေ့ပါနှင့် အားလုံးအိုကေပြီး အစိမ်းရောင် ပြမှသာ အင်တာနက်သုံးတာနှင့် အခြား Hard disk အပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ D:/ တို့ တစ်ခြား external Hard disk နှင့် Flash drive တွေကို virus စစ်ဆေးပါ.
ကဲအားလုံး အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်. ပြောပြချင်တာကတော့ အများကြီးပါပဲ. အထူး သတိထားစေချင် တာလေး လောက်ကိုပဲ ပြောပြပေးလိုက်တာပါ. အောက်မှာ Firewall program ကို download လုပ်လိုက်ပါ. ZoneAlarm PRO Firewall 2012 latest version ပါပဲ။
ZoneAlarm PRO Firewall 2012Download ifile Part1 | Part2
Download Mediafire Part1 | Part2
Part1 | Part2 အောက်မှာ window7version အားလုံးနဲ့ စမ်းပြီးပါပြီ. 32 bit ကော 64 bit ကော အဆင်ပြေပါတယ်. မပြေဘူးမလုပ်ပါနဲ့. ကျွန်တော် သုံးနေတဲ့ Loader ပါ . အောက်မှာ Download လုပ်လိုက်ပါ. သူ့ကို apply ပေးပြီးတာနဲ့ ခဏနေပြီးသွားရင် restart တောင်းပါလိမ့်မယ်. အဲ့ဒီ့အခါကျရင် ပေးလိုက်ပါ. ခုနက ပြောထားသလိုပါပဲ. ဒီ loader နဲ့ အဆင်မပြေရင် window update လုပ်ထားပြီးပြီဆိုတာ ၈၀% သေချာပါတယ်. အဲ့အတွက်ကြောင့် အပေါ်က ပြောထားတဲ့အတိုင်း system restore လုပ်ပြီးမှ loader သုံးပြီး activated ဖြစ်အောင် လုပ်ပါ. Download ယiဂd0ယ ၇ L04dင်r (For All versions) 32 bit & 64 bit
ခန့်ဇော်ဟိန်း : ကိုညီရေ USB DISK Security 6.1.0.432 ရဲ့ serial number လေးလုပ်ပါဦး အစ်ကို
ညီလေးရေ ဖိုင်ဆိုက်က ငယ်နေလို့ တစ်ခါတည်းပဲ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်. ဒီ software ကတော့ autorun virus နှင့် အခြား trojan အမျိုးအစား virus များကို တော်တော် များများ သတ်ပေးပါတယ်. အခု နောက်ဆုံးထွက် version ပါပဲ. အဆင်ပြေမယ် လို့မျှော်လင့်ပါ တယ်. အောက်မှာ Download လုပ်ယူလိုက်ပါ.
တင်ပေးလိုက်ပါပြီ ညီလေး အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်. Minus ကနေဆိုရင်တော့ နှိပ်လိုက်တာနဲ့ တန်းပြီး Download link ကျလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်. ifile ကနေ ဆိုရင်တော့ စောင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်. ကြိုက်ရာကို ရွေးပြီး Download လုပ်ထားသင့်ပါတယ်. ကျွန်တော် ဖိုင်တွေကို ယခုထက်ပိုပြီးတော့ သိမ်းဆည်းထားစေချင်လျှင်၊ ဒါမှမဟုတ် ကျွန်တော် ဖိုင်တွေ သိမ်းဆည်းဖို့ အခု 1GB ပဲ ရသေးပါတယ်. ကျွန်တော် invite လုပ်ထားတဲ့သူ ဒါမှမဟုတ် ကျွန်တော့်ရဲ့ invite link ကို နှိပ်ပြီး account လုပ်တဲ့သူ များလာမှသာလျှင် ကျွန်တော် သိမ်းဆည်းနိုင်မည့် space များပြားလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်. အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ အားလုံးပဲ ဖိုင်တွေကို Download link တွေ ကြာရှည်ခံနိုင်အောင် http://min.us/rhFSgdv ကို နှိပ်ပြီး account လုပ်ထားပေးပါ. ဒါမှမဟုတ်ရင် ဆိုက်ရဲ့ညာဖက်ခြမ်းက minus ပုံကို နှိပ်ပြီးတော့ account တစ်ယောက်ကို တစ်ခုစီပဲ လုပ်ထားရင်တောင် ကျွန်တော် ဖိုင်တွေ သိမ်းဆည်းနိုင်ဖို့ space တွေ များလာမှာပါ. ဒီဆိုက်ဟာ Direct download link ကို ပါ ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ အားလုံးအတွက် အဆင်ပြေအောင် account လုပ်ခိုင်းတာပါ. ကျွန်တော့် အတွက်တင်လည်း မဟုတ်ပါဘူး. အကောင့်လုပ်ထားတဲ့ သူတွေ မည်သူမဆို အခုလိုမျိုး invite လုပ်လိုက်တာနဲ့ တဖြည်းဖြည်းချင်း သိမ်းဆည်းနိုင်တဲ့ space တွေ များလာမှာပါ. ပြီးတော့ ကျွန်တော် ပြောသလိုပါပဲ. ဖိုင်တွေတင် သိမ်းဆည်းနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး. format တော်တော်များများကို သိမ်းဆည်းနိုင်ပါတယ်. format ဆိုတာကတော့ .mp4, .rar, .001, .exe အစရှိသည်ဖြင့် "." ရဲ့ နောက်မှာ ဆုံးတဲ့ အမည်တွေကို format လို့ ခေါ်ဆိုတာပါ. format တွေဟာ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု မတူကြပါဘူး. ဘယ် program တွေကိုပဲ သုံးသုံး သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် format နဲ့ ဖိုင်တစ်ခုတော့ ရလာမှာပါ. ဥပမာ adobe pagemaker နဲ့သိမ်းရင် .pmd format နဲ့ ရလာသလိုမျိုးပေါ့. အားလုံးပဲ အဆင်ပြေနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် . ifile နှင့် mediafire ကတော့ ဒီပုံစံအတိုင်းဆို ကြာရှည်ခံဖို့ သိပ်မလွယ်တော့လို့ အခုလို စီစဉ်လိုက်တာပါ. တောင်းဆိုထားတာ အရမ်းများပါတယ်. တစ်ချို့ program တွေဆိုရင် 2GB လောက်တောင် ရှိပါတယ်. guitar pro ကို program နဲ့ keygen သာ တင်ပေးလိုက်တာ. သူနဲ့ တွဲသုံးရမယ့် ဖိုင် မတင်ပေးနိုင်ပါဘူး. ဘာလို့လဲဆိုတော့ 1GB ကျော်နေလို့ပါ. အခု ဒီ minus ဆိုက်မှာလဲ 1GB ပဲ ရတဲ့အတွက် တင်ပေးတဲ့ဖိုင် 1GB ပြည့်တာနဲ့ အကောင့်အသစ်လုပ်ရင် လုပ်မလုပ်ရင် ထပ်တင်ဖို့ မလွယ်တော့ပါဘူး. . Download Minus | Download ifile
Program တွေကို ဖြုတ်တဲ့နေရာမှာ အကောင်းဆုံးနှင့် ကျွန်တော် အကြိုက်ဆုံး Advanced uninstaller v-10.5.6
အရင်တုန်းကတော့ your uninstaller က ကောင်းတယ်ပေါ့. ဒါပေမယ့် အခု program တွေ ဖြုတ်တဲ့နေရာမှာ အတော်လေး စုံပြီးတော့ အထဲမှာ များပြားလှတဲ့ tools တွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ Advanced uninstaller ကို တော့ လုံးဝ မမီနိုင်တော့ပါဘူး. Program တွေကို uninstall လုပ်တဲ့နေရာမှာ ကုန်စင်အောင် ဖြုတ်ပေးနိုင်တဲ့အပြင် အထဲမှာ ဘာတွေ အပိုပါသလဲဆိုတော့ .. Uninstall Programs Tool
Installation monitor Tool
Quick Cleaner Tool
Start Menu Cleaner Tool
Start Menu Items Manager Tool
Control panel Manager Tool
Reports & Extra Tools စတဲ့ Tools တွေ ပါဝင်ပါတယ်.
အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ Advanced uninstaller version-10.5.6 ဟာ နောက်ဆုံးထွက် Version ဖြစ်ပါတယ်. ကျွန်တော် ဘာ့ကြောင့် ကြိုက်ရတယ်ဆိုတာကို Download လုပ်ပြီး သုံးကြည့်လိုက်ရင် သိပါလိမ့်မယ်. တစ်ခါတစ်လေ တစ်ချို့ program တွေကို ဖြုတ်တဲ့နေရာမှာ window မှာ တစ်ခါတည်း ပါထားပြီးသားဖြစ်တဲ့ programs and features ထဲကနေ ဖြုတ်တဲ့အခါမှာ ကုန်စင်အောင် မဖြုတ်ပေးဘဲနှင့် registry ထဲမှာ ကျန်နေခဲ့တတ်ပါတယ်. အဲ့လို မျိုး ကျန်နေခဲ့ရင် နောက်ထပ် program တင်တဲ့အချိန်မှာ တင်မရတာမျိုး ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်. ဥပမာ adobe product ဖြစ်တဲ့ adobe premiere တင်သည့်အခါမှာ သော်လည်းကောင်း၊ Antivirus program များကို မိမိလက်ရှိ သုံးနေသည့် antivirus program ကို မကြိုက်လို့ တစ်ခြား antivirus program ကို ပြောင်းတင်တဲ့ အခါမှာ ယခင်က antivirus program ကို ကုန်စင်အောင် မဖြုတ်နိုင်တဲ့အတွက် တင်လို့မရတဲ့ အခက်အခဲမျိုးတွေကို မကြာခဏ ကြုံဖူးကြမှာပါ. အဲ့လိုမျိုးအခက်အခဲတွေ မဖြစ်ရလေအောင် uninstaller program တွေကို သီးခြား ထပ်ပြီး သီးသန့်ထုတ်လုပ်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်. ကျွန်တော်ပြောတာ မရှင်းရင် Kaspersky တင်မရခြင်းပြဿနာအစ AVG က ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့လားမသိဘူး ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်. ရှာဖတ်ကြည့်လိုက်ရင် ရှင်းသွားလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်. ယခု တင်ပေးတဲ့ Advanced uninstaller version-10.5.6 ကို Download လုပ်ချင်ရင် အောက်မှာ တင်ထားပေးပါတယ်. File Hosting အသစ်ကနေ တင်ပေးထားတာ ဖြစ်လို့ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်.
Ifile | Mediafire | Mirrorcreator | Minus
ဆိုက်ရဲ့အားသာချက်Linux, Mac, Window ကြိုက်တဲ့ O/S ကနေ ဖိုင်တင်ခြင်း Download လုပ်နိုင်ခြင်း။
ဖိုင်တင်နည်းနှင့်account ပြုလုပ်ခြင်းပထမဦးဆုံး ဒီကို နှိပ်ပြီး website ကို အရင်သွားလိုက်ပါ။ ပြီးတာနှင့် အပေါ်မှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း ဆိုက်ကို ရောက်သွားတာနဲ့ sign up ကို နှိပ်ပြီး account အသစ်လုပ်ထားလိုက်ပြီးတော့ ဖိုင်တွေကို သိမ်းဆည်းလို့ရပါပြီ. ဖိုင်တွေကို အချိန်ကြာမြင့်စွာ သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်. သူငယ်ချင်းတွေကို ဖိတ်ခေါ်နိုင်ရင် ပိုပြီးတော့ အဆင်ပြေပါတယ်. ကျွန်တော် နောက်ပိုင်း အခုဆိုက်ကနေပဲ တင်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်. အောက်မှာ ကျွန်တော် တင်ပြထားပါတယ်. လုပ်ဖြစ်အောင် လုပ်ထားလိုက်ပါ. ဖိုင်ကို တင်ပေးပြီး သူငယ်ချင်းတွေကို share ပေးချင်ရင် direct download link ကိုပါ ပေးလို့ရပါတယ်. စေတနာများစွာဖြင့်ညီနေမင်း(နည်းပညာ) Read More
Screen ကို password ဖြင့် lock ချထားလို့ရတဲ့ matri...
Mediafire တွင် ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ဖိုင်အဖျက်ခံရခြင်း...
format အားလုံးနီးပါးကို လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Format Fac...
မကြည့်စေချင်တဲ့ဆိုက်တွေ ပိတ်ဖို့ Anti-Porn 17.6.3....
Program တွေကို ဖြုတ်တဲ့နေရာမှာ အကောင်းဆုံးနှင့် ကျ...
Mediafire ဆိုက်အကြောင်းနှင့် ရင်ထဲကပြောချင်တာလေးမျ...
ဖိုင်ဖြေရာမှာ ဒီလို error က ဘာ့ကြောင့်ဖြစ်တာလဲ.
Ohmicide Pro VST v1.10
file တွေကို ကူးတဲ့ နေရာမှာ မြန်ဆန်စေမည့် tear copy...